BAYAVEVA NGOWAMABHAYISEKILI - Ilanga News
Home Izindaba BAYAVEVA NGOWAMABHAYISEKILI
BATHWALE kanzima abezimo eziphuthumayo betakula abantu abasinde engozini yetekisi ephonseke eweni KwaNgcolosi ngaseHillcrest.
UYAVEVA ngomjaho wamabhayisikili, amaShovashova, umphakathi waKwaNyuswa ngaseBotha’s Hill, eThekwini owusola “ngokudala” isiphihli sengozi yetekisi edlule nemiphefumulo yabawu-6, kwalimala kabi abawu-5 izolo ngeSonto ngesikhathi umshayeli wayo ehluleka wukuyilawula yakhalakathela eweni.
Leli tekisi kuthiwa belisuka KwaNyuswa lilibangise ePinetown lihamba ngomgwaqo ongaphakathi, onqamula KwaNgcolosi, ukhuphukela KwaNqetho bese uphumela ePinetown, kwazise indlela ejwayelekile eseBotha’s Hill, ibivaliwe ngenxa yomjaho yamaShovashova.
UNkz Thandazile Phungula oyilungu lomphakathi, uthi le ndlela itekisi ebelihamba ngayo yimbi futhi iyehlela. “Siwumphakathi sesiyafisa ukuba le nto yamaShovashova ivalwe ngoba uma kuqhubeka kanjena, bazophela abantu,” kusho yena.
Okhulumela abezimo eziphuthumayo, uMnu Garrith Jamieson, uthi basizwe yindiza enophephela emhlane ukuze bakwazi ukutakula abantu eweni lapho itekisi ikhalakathele khona. “Sifika endaweni yesigameko, kube wumzukuzuku ukufinyelela kwabebelimele kwazise bekufanele sihambe ngezinyawo ibanga elingamakhilomitha amabili ukufika lapho bekukhona itekisi,” kusho uMnu Jamieson.
Ikhansela lendawo, uMnu Michale Shelembe, lithe: “Into eyenze igcine isihamba ngapha, wumjaho wamabhayisikili njengoba zonke izimoto bezijikiswa zingakwazi ukuhamba ngeHillcrest. Ngithole ukuthi iphelelwe ngamabhuleki, kanti ihamba endaweni embi lapho umgwaqo uyibhuqu khona.
“Kube yinhlanhla nokuthi abantu bayibone ngesikhathi iphonseka ngoba ukube kabayibonanga, laba bantu bekuyophela isikhathi eside kabi kungaziwa ukuthi bashonaphi njengoba uma usemgwaqweni ubungakwazi ukubona lapho iwele khona. Umphakathi ukhala ngamaShovashova nje, yingoba ukholwa wukuthi le ngozi ibingeke yenzeke ukube umgwaqo ubungavaliwe,” kusho uMnu Shelembe.
Okhulumela uMnyango wezokuThutha, ukuPhepha nokuXhumana koMphakathi KwaZulu-Natal, uMnu Kwanele Ncanele, uthe ungqongqoshe walo mnyango, Mnu Bheki Ntuli uphazamiseke kakhulu emoyeni ngesimo esenzeke emigwaqeni yalesi sifundazwe kule mpelasonto.
Sithatha ngokuthi yimpelasonto yobumnyama ngoba ezingozini ezintathu nje kuphela, kushone abantu abangaphezulu kuka-15. Izolo ebusuku uMnu uNtuli kuphoqe ukuba aziyele mathupha ku-N2 eMtubatuba lapho kubhubhe khona izisebenzi zikamasipala waseJozini ngesikhathi itekisi ishayisana neloli.
“Kumanje umshayeli weloli usagcwele amathafa. Konke lokhu kushayisa ngovalo ngoba kufa nabantu abangenacala. Igcabha enkulu siyibeka kubashayeli ngoba sikholwa wukuthi zonke lezi zingozi bezingagwemeka.
“Akhona amathimba okumanje ayaphenya ngalezi zingozi futhi njengohulumeni siyazwelana nayo yonke imindeni elahlekelwe,” kusho uMnu Ncalane.
UMnyango wezeMidlalo KwaZulu-Natal ngomlomo womkhulumeli wawo, uNkz Phathisa Mfuyo, uthe ngeke baphawule ngalolu daba ngoba lo mjaho kawuhlanganise lutho nomnyango.
AbamaShovashova bacele ukuthunyelwa imibuzo nge-e-mail, nokho kushaye isikhathi sokuloba bengaphendulile.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe kuvulwe icala lokubulala ngokungenhloso.
Previous articleBamfisele unwele olude uMotaung
Next articleUsomabhizinisi ubasela isikweletu